अर्डब्लॉक: यो के हो र यसले तपाईंको अर्डिनोलाई के गर्न सक्छ नि: शुल्क हार्डवेयर
अरुडिनो बोर्डहरूको अधिग्रहण केहि पुरानो भएको छ र बढि बढी जेबको पहुँचमा छ, तर यसले कसरी काम गर्दछ? यो स्पष्ट छ कि यसको कामको लागि हामीलाई कोड वा एक प्रोग्राम चाहिन्छ जुन हामी चाहन्छौं जुन अपरेसन गर्दछ। यो, दुर्भाग्यवस, सबैको लागि उपलब्ध छैन र हो तपाईलाई प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यकता पर्छ आर्डिनोलाई मोटर चलाउन वा बत्ती खोल्नको लागि.
यी सबैले दृश्य सम्पादकहरू र भिजुअल प्रोग्रामिंगलाई धेरै लोकप्रिय बनाए। यो प्रकार प्रोग्रामिंगले तपाईंलाई ब्लकहरू मार्फत प्रोग्रामहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन माउसको साथ तानेको हुन्छ, घुमाउरो ब्रेसहरू बन्द गर्न बिर्सिनुभयो वा लामो फंक्शन नामहरू लेख्नु पर्‍यो। एक लोकप्रिय उपकरण जसले अर्डिनोसँग दृश्य प्रोग्रामिंग परिचय गर्दछ अर्डब्लॉक भनिन्छ।
1 अर्डब्लक भनेको के हो?
2 हाम्रो अपरेटिंग प्रणालीमा अर्डबुलक कसरी स्थापना गर्ने?
2.1 हाम्रो कम्प्युटरको तयारी
2.2 अर्डबॉक स्थापना
3 अर्डब्लकको लागि विकल्पहरू
अर्डब्लक भनेको के हो?
अर्डब्लक एक प्रोग्राम हो वा अर्डिनो आईडीईको पूरक हो जसले हामीलाई कोड लेख्नको आवश्यकता बिना प्रोग्रामहरू र कोड सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।, कि भिजुअल उपकरणहरूको माध्यमबाट हो। यसको यसका फाइदाहरू छन् किनकि यदि हामी कसरी प्रोग्राम गर्ने जान्छौं भने, हामी डिबगिंग प्रक्रियामा धेरै समय बचाउनेछौं किनकि हामी राम्रोसँग "" लेख्न बिर्सदैनौं; न त यसले कोड कोष्ठकहरू बन्द गर्दछ। दृश्य उपकरणको साथ प्रोग्रामि Program प्रोग्रामिंग हो दुबै नौसिखाहरू र विज्ञ प्रोग्रामरहरूको लागि उद्देश्यले र प्रयोगकर्ताहरूका लागि जसले प्रोग्राम कसरी थाँहा जान्दैनन् र यसलाई कसरी गर्ने सिक्न चाहान्छन्।
हामीले भनेझैं, अर्डब्लक प्रोग्राम मात्र भन्दा पूरक हो किनकि यसको सञ्चालनका लागि अर्डिनो आईडीई हुनु आवश्यक छ। तसर्थ, एक सारांश बनाएर हामी भन्न सक्छौं कि अर्डब्लक कोड प्रोग्रामिंगलाई भिजुअल प्रोग्रामिंगमा अनुकूलन गर्न अर्डुइनो आईडीईको अनुकूलन हो।
अर्डब्लोकसँग नविकृत प्रोग्रामरको लागि उपकरणको अलावा बढी सकारात्मक चीजहरू छन्। यसको एक सकारात्मक चीज सम्भावना हो परियोजनाहरू छिटो सिर्जना गर्न ब्लकहरूको साथ काम गर्नुहोस्.
अर्डब्लक अवरोधका साथ भिजुअली रूपमा कार्य गर्दछ र कम्पोनेन्टहरूसँग काम गर्न सक्दछ। यसैले, हामी एउटा ब्लक सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन पाels्ग्रा हो, अर्को संगीत हो र अर्को प्लेट जुन; प्रत्येक चोटि जब हामी यी ब्लकहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौं हामी यसलाई नाम दिनेछौं वा यसलाई सन्झ्यालको एक छेउबाट विन्डोको अर्को छेउमा तान्ने छौं।
अर्डबलोकले हामीलाई प्रदान गर्ने कार्यहरू र सम्भावनाहरू उस्तै हुन् जुन अर्डिनो आईडीईले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ, त्यो हो, हामी अर्डुलोकलाई हाम्रो अर्डिनो बोर्डमा जडान गर्न सक्छौं, कोड पठाउन सक्छौं जुन अर्डब्लकले ब्लकहरूको लागि सिर्जना गरेको हो र हाम्रा प्रोजेक्टहरू छिटो र सजिलोसँग परीक्षण गर्न सक्छ। र यो यो हो कि जब हामी प्रोग्राम समाप्त गर्छौं, सुरक्षित गरिएको जानकारी अझै पनी कोड, कोड जुन अरडब्लकले हाम्रो ब्लकहरूको साथ सिर्जना गरेको हो.
हाम्रो अपरेटिंग प्रणालीमा अर्डबुलक कसरी स्थापना गर्ने?
ठीक छ, हामी पहिले नै थाहा छ वा अर्डब्लक के हो भन्ने बारे स्पष्ट विचार छ, तर यो हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी स्थापना भएको छ? हामी कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं?
हाम्रो कम्प्युटरको तयारी
यद्यपि एक मात्र कागजात जुन अर्दुबलकको बारेमा अवस्थित छ अ English्ग्रेजीमा छ, सत्य यो हो कि स्थापना प्रक्रिया एकदम सरल र छिटो छ यदि हामीसँग अर्डिनो आईडीई छ भने। सबै भन्दा पहिले हामीसंग छ हाम्रो Arduino IDE कम्प्युटर मा छ, यदि हामीसँग यो स्थापित छैन भने, तपाईं रोक्न र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसलाई Gnu / Linux मा कसरी स्थापना गर्ने। हामीलाई चाहिने अर्को तत्व हो जाभा भर्चुअल मेसिन वा यस्तै प्रकारको छ टोलीमा। यदि हामी Gnu / लिनक्स प्रयोग गर्दछौं, आदर्श शर्तमा छ ओपनजेडीके, विशेष गरी Oracle र गुगल बीचको टकराव पछि। अब जब हामीले सबै चीज गर्यौं, हामी जानु पर्छ आधिकारिक अर्डब्लक वेबसाइट र अर्डबॉक प्याकेज प्राप्त गर्नुहोस्, प्याकेज जुन जाभा ढाँचामा वा एक्स्टेन्सन .jar सँग छ। डाउनलोड गरिएको फाईल स्थापना विजार्डको साथ कार्यान्वयन योग्य फाईल होईन, त्यसैले हामीले म्यानुअल तरिकाले सबै गर्नुपर्दछ।
पहिलो हामी अर्डिनो IDE खोल्छौं र प्राथमिकताहरू वा प्राथमिकताहरूमा जान्छौं। अब हामी विकल्प "स्केचबुक स्थान:" मा जान्छौं जुन एक नयाँ विन्डोमा देखा पर्ने छ। यो ठेगाना हो जहाँ हामीले केही प्लगइनहरू वा अर्डिनो IDE को तत्वहरू बचत गर्नुपर्नेछ। स्थान वा ठेगाना जुन देखा पर्दछ "कागजात / अर्दूइनो" वा घर / कागजात / अर्डिनो जस्तो केहि हुनेछ। हामी ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्दछौं तर यदि हामीले यो परिवर्तन गर्‍यौं भने डाउनलोड गरिएको अर्डब्लक फाइललाई त्यहाँ सार्नको लागि कुन नयाँ ठेगाना हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। यदि हामीले अर्डिनो फोल्डर खोल्छौं भने हामी त्यहाँ अन्य सबफोल्डरहरू र फाइलहरू देख्दछौं।
हामीले तलको ठेगाना "उपकरणहरू / अर्डुब्लकटुल / उपकरण / अर्डबुलक - all.jar" छोडेर अर्डब्लॉक प्याकेज सार्नु पर्छ। यदि हामीसँग अर्डिनो आईडीई कार्यक्रम खुला छ भने, यो समय यसलाई बन्द गर्ने समय हो र जब हामी यसलाई फेरि खोल्दछौं, उपकरण वा उपकरण मेनू भित्र अर्डब्लक विकल्प देखा पर्नेछ। यसमा क्लिक गर्दा एउटा नयाँ विन्डो देखा पर्नेछ जुन अर्डब्लक इन्टरफेससँग मिल्छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो केहि सरल र द्रुत तर भ्रामक कुरा हो यदि हामीलाई स्थापना प्रक्रिया थाहा छैन भने।
अर्डब्लकको लागि विकल्पहरू
यद्यपि अर्डब्लक अरुडिनोको लागि केही नयाँ र अनौंठो लाग्न सक्छ, सत्य यो हो कि हामीले दृश्य प्रोग्रामिंग गर्नु पर्ने यो एक मात्र कार्यक्रम वा उपकरण होइन। त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जसले दृश्य प्रोग्रामि onमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, यस्तो हदसम्म कि अर्दुबलकमा अवस्थित सबै विकल्पहरू अद्वितीय प्रोग्रामहरू हुन् न कि एक्सटेंशनहरू वा अर्डिनो आईडीईमा एड्-अनहरू हुन्।
यी विकल्पहरूको पहिलो मिनीब्लोक भनिन्छ। मिनीब्लोक एक पूर्ण प्रोग्राम हो जुन दृश्य प्रोग्रामिंगमा केन्द्रित छतसर्थ, यसको पर्दा तीन भागमा विभाजित गरिएको छ: खण्डहरू निर्माण गर्नका लागि अर्को भाग, जहाँ हामी ब्लकहरू सार्नेछौं जुन प्रोग्राममा हामी प्रयोग गर्न चाहान्छौं र तेस्रो भाग जुन हामीले सिर्जना गर्ने कोड देखाउनेछ, अधिक उन्नत प्रयोगकर्ताहरू। मिनीब्लोक यसको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ लिङ्क.
दोस्रो उपकरण भनिन्छ Arduino को लागी Scratch। यस उपकरणले प्रयास गर्दछ Scratch बच्चाहरूको कार्यक्रम कुनै पनि स्तरमा अनुकूलन गर्नुहोस् र उही दर्शनको साथ प्रोग्रामहरू सिर्जना गर्दछ। Arduino को लागी Scratch एक पूरा कार्यक्रम हो, त्यसैले बोल्नको लागि, स्क्र्याचको फोर्क।
उपकरणको तेस्रो अझै राम्रोसँग स्थापित भएको छैन, तर यो दृश्य प्रोग्रामिंग उपकरणहरू बीच एक आशाजनक उपकरण हो। यो उपकरण भनिन्छ मोडकिट, एउटा उपकरण जुन किकस्टार्टरमा जन्म भएको थियो तर बिस्तारै उत्कृष्ट तरिकाले परिपक्व हुँदैछ। अन्य कार्यक्रमबाट फरक हुन सक्छ उन्नत प्रयोगकर्ताहरू भन्दा नौसिखिए उपयोगकर्ताहरूमा बढी विशेषज्ञता प्राप्त गर्दछ। अन्तमा, अर्डब्लकको अर्को विकल्प अर्डिनो आईडीईको परम्परागत प्रयोग हुन सक्छ, यस्तो विकल्प जुन दृश्यात्मक छैन र त्यो मात्र सबै भन्दा बढी विशेषज्ञ प्रोग्रामरहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ।
अर्डबॉक यो एक धेरै रोचक उपकरण छ, कम्तिमा नौसिखाहरुका लागि। तर यो सत्य हो कि यदि तपाईं एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने, यी प्रकारका उपकरणहरू कोड छिटो सिर्जना गर्न बनाउँदैन तर बिल्कुल विपरीत। माउसको प्रयोग गरेर, अनौठो रूपमा पर्याप्त, किबोर्डको प्रयोग भन्दा ढिलो छ।
यद्यपि यदि हामी अनुभवहीन प्रोग्रामरहरू हौं वा हामी सिक्दैछौं भने, अर्डब्लक एक अत्यधिक सिफारिश गरिएको एक्स्टेन्सन हो आवश्यक छैन भन्नका लागि यी चरणहरूमा यो सिन्ट्याक्स त्रुटिहरू र साना समस्याहरू बनाउन अपरिहार्य छ जुन पत्ता लगाउन र अर्डब्लकसँग पार गर्न गाह्रो छ। यद्यपि तपाईं के रोज्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » अर्डब्लॉक: यो के हो र यसले तपाईंको अर्डिनोको लागि के गर्न सक्दछ
अस्कर मानसीला भन्यो
नमस्कार, तपाईंलाई भेटेर खुसी लाग्यो। के अर्डुलोकले अर्डिनोको नयाँ संस्करणका साथ काम गर्दछ?
अस्कर मानसीलालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, यी ग्राफिक संस्करणहरूको साथ तपाई लेखन जस्तै प्रोग्राम विकास गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को शब्दमा, के सबै लिखित कोड खण्डहरूमा गर्न सकिन्छ?
अर्को प्रश्न, तपाईं कसरी परिभाषित वा .h, subroutines आदि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो अवस्था मा?